ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဤအပိုင်းသည် YBOP နှင့်အခြားသူများ၏ပြင်းထန်သောသံသယများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများနှင့်ဝေဖန်ချက်များကိုဝေဖန်ထားသည်။ အချို့သောနည်းစနစ်များတွင်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြားသူတွေမှာ, ကောက်ချက်မလုံလောက်ထောက်ခံပုံရသည်။ နှင့်အခြားသူများအတွက်မူအသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်ဝေါဟာရသည်အမှန်တကယ်လေ့လာမှုရလဒ်အရလှည့်စားနေသည်။ အချို့ကတကယ့်တွေ့ရှိချက်များကိုလွန်စွာမှလွဲမှားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားသူများကမူချယ်ရီရွေးချယ်မှုနှင့်သူတို့ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုများကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း။ လေ့လာမှု၏အမည်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၌သင်မူရင်းစာရွက်နှင့်ဆက်စပ်သောလင့်ခ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ လေ့လာမှုများ၏ဝေဖန်မှုအပြင်ရွေးချယ်ထားသောဝါဒဖြန့်မှုအပိုင်းများကိုလည်းဖျက်ပစ်သည်။ (သင် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက ဒီစာမျက်နှာ.)
YBOP ဒီရေးသားခဲ့သည်စာနယ်ဇင်းများတွင်ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးပြန့်ပွားတုံ့ပြန်: ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ porn စွဲ (ဧပြီ, 2015) ထောက်ပံ့ 50 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ် 2016, (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ)။ နီးပါးတိုင်းပြောနေတာမှတ်နှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုတစ်ခု debunking အဘို့ဤကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ သငျသညျသုတေသီများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါများကိုမြင်ရသဖြင့်ရရှိစေရန်အတွက်ဒဏ္ဍာရီများစွာကိုဖြေရှင်းရိုးရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုကငျြတယျဆိုရငျ: (ဗီဒီယို) porn ဒဏ္ဍာရီ - ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်စွဲလမ်းပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နောက်ကွယ်မှာအမှန်တရား,။ (Vimeo အပေါ်) တွင်အောက်ပါဆွေးနွေးပွဲတွေ 2018 NCOSE conference မှာတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်:
Update ကို (,ပြီလ, 2019)
YBOP ၏ဝေဖန်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်စာရေးသူအနည်းငယ်သည် YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်အုပ်စုတစ်စုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု.
အကယ်၍ သင်သည်ဤ“ မေးခွန်းထုတ်စရာနှင့်လှည့်စားသောလေ့လာမှုများ၏ဝေဖန်မှုများ” စာမျက်နှာတွင်သင်ရှာမတွေ့နိုင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအားဆန်းစစ်လေ့လာနေပါကဤစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပါ - porn သိပ္ပံ Deniers မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AKA: "RealYourBrainOnPorn.com" နှင့် "PornographyResearch.com")။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သူများ၏“ သုတေသနစာမျက်နှာ” ကို၎င်း၏ချယ်ရီရွေးကောက်ယူစာရွက်စာတမ်းများ (အများစုသည်အမှန်တကယ်လေ့လာခြင်းမဟုတ်ပါ)၊ ဘက်လိုက်မှု၊ မပြည့်စုံသောပျက်ကွက်မှုများ၊ စာရင်းပြုစုထားသည့်လေ့လာမှုများကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်လုံးလုံးလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဝေဖန်မှု "Prause et al ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" (2016), နီကိုးလ် Prause, Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley, ဒင်း Sabatinelli, Greg Hajcake (Prause et al ။ , 2016)
“ Theကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိ။ 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုပုံစံ' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း” (၂၀၁၄)၊ ဒေးဗစ်လိုင်၊ နီကိုးလ်ပရာ့စ်နှင့်ပီတာဖင်နမ်Ley et al။ , 2014)
စွဲလမ်းအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းမှရိပ်မိစွဲလမ်း (2015) ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏, Grubbs JB, Exline JJ, Pargament KI, Hook ဖြစ်မှု, Carlisle တို့ RD ။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စိတ်ဓာတ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှရိပ်မိစွဲ: တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါနှင့်ကျော်အချိန် (2015) ။ Grubbs JB, Stauner N ကို, Exline JJ, Pargament KI, Lindberg MJ ။
လူသိများသောနှစ် ဦး နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာရေး
1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, မ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် (သံမဏိ et al ။ , 2013).
Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley တိမောသေ Fong သည်, နီကိုးလ် Prause
Nicole Prause ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုအား“ Rory Reid” ဟုခေါ်သည့်“ ဝေဖန်မှု” အပေါ် YBOP တုံ့ပြန်မှု (သံမဏိ et al.)
နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားအရာများစွာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှုကို (Wilson ၏ဝေဖန်မှုဖြင့်အစပြုခဲ့သည်) သံမဏိ et al။ , 2013)
ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့် "Porn စွဲ" နဲ့တသမတ်တည်းရှိမနေသောထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ 2) Modulation (Prause et al ။ , 2015).
Prause, နီကိုးလ်, Vaughn R. သံမဏိ, ကင်မရွန် Staley, ဒင်း Sabatinelli နှင့် Greg Hajcak ။
peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်: ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
"မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated ကိုကြည့်ရှုခြင်း" (Prause & Pfaus, 2015) ။ နီကိုးလ် Prause & ဂျင်မ်ပိုဖ်:
Cyberpornography: အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ခံစားစွဲ, လိင်စွမ်းရည်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2016), စာရာ Blais-Lecours, Marie-ဆိပ်ခံတံတား Vaillancourt-Morel, Stephan Sabourin, Natacha Godbout
Cyberpornography သုံးစွဲမှု profiles နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးများ (2017) က Marie-ဆိပ်ခံတံတား Vaillancourt-Morel စာရာ Blais-Lecours, Chloe Labadie, ဆိုဖီ Bergeron, Stephan Sabourin, Natacha Godbout အတွက်ကောင်းပြီ-ဖြစ်ခြင်း
အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောအားထုတ်မှု (ပန်းခြံ et al ။, 2016) ပြန်ရုပ်သိမ်း။
"Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား၏ဝေဖန်မှု Cross-Section နှင့် Josh Grubbs အားဖြင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း "(2019), မှစ. ရလဒ်များ
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ” နှင့်စပ်လျဉ်း။ စွပ်စွဲချက်များဝေဖန်မှု (၂၀၂၀)
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်း၏ဝေဖန်မှု: အသက် ၁၈-၄၄ နှစ် (အမျိုးသားများ) တွင်သုံးခြင်း၊ စွဲလမ်းစေခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါပျက်စီးခြင်း၊ ဆက်စပ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း။
“ 2017 ခုနှစ်၊ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စုံတွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသူ၊ ပါဝင်သူ - သတင်းပေးသူများ၊ အောက်ခြေမှတက်သုတေသနများ” ၏ဝေဖန်မှု၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေ Fisher၊ Lorne Campbell ။
“ အပြာစာပေ၏သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၊ စုံတွဲဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသူ၊ ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူ - သတင်းပေးခြင်း၊ အောက်ခြေမှအစသုတေသနများ” ၏ဒုတိယဝေဖန်မှု (၂၀၁၇)၊ တေလာကိုဟွတ်၊ ဝီလျံအေဖစ်ရှာ၊လူကြိုက်များသောမီဒီယာတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသုတေသနပြုခြင်း။ "
"babyish အမျိုးသမီးများနေ့မှအမုန်းတရားပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုတကယ် Is ၏ဝေဖန်မှု? ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများတစ်ကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန်နမူနာ "(2016), တေလာ Kohut, ဂျိုဒီအယ်လ် Baer, ​​Brendan Watts အတွက် Nonusers သန်းနောက်ထပ်ကျားသာတူညီမျှသဘောထားများကိုကိုင်ထားပါ။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့ - လေ့လာမှုအသစ် porn အသုံးပြုသူများသည် '' သာတူညီမျှသဘောထား '' ရှိဟုဆိုသနညျး ယောနရောသမအားဖြင့် (2015) ။
Paul Wright PhD သည် Porn သုတေသီများ၏နည်းဗျူဟာများကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများမော်ကွန်းတိုက်သို့ Paul Wright ၏စာနှစ်စောင်အကြောင်း YBOP ဆောင်းပါး - Paul Wright PhD မှသုတေသီများကိုလှည့်စားသောနည်းဗျူဟာများ (၂၀၂၁)
လေ့လာရေး Porn အသုံးပြုသူများအတွက်စက်လှေကား (နှင့်လေ့) ကိုရှာပါ။
အဆိုပါ realyourbrainonporn (scienceofarousal.com) "လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုဒ်မ" Debunking: အဆိုပါ အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၊
ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းများကိုချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ (မုဒိမ်းမှုနှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပြောဆိုမှုများ)
“ Arousal & Relationships of Science” သုတေသနစာမျက်နှာကိုဖြုတ်ချသည်။
အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းဆုံးနားလည်မှုလွဲမှားခြင်း (2017) ဒွန် Hilton က MD
Jarryd Bartle ၏ဆောင်းပါးအပေါ်တုံ့ပြန်မှု“ရိုးရာအနားယူ! ညစ်ညမ်းယဉ်ကျေးမှု၏အဆုံးမဖြစ်ပါတယ်"(2017)
ဗီဒီယို။ ။ မှားယွင်းသောအမှားများ - စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရား။
အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ (Park က et al ။ , 2016) ပြန်ရုတ်သိမ်းရှိသည်နီကိုးလ် Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု
ဗွီဒီယို -“ ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုဖယ်ရှားရန်နီကိုးလ်ကဘာကြောင့် DMCA များကိုကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ရသနည်း”၊ ရေဗက္ကာ ၀ တ်ဆင် (skepchick)
“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း” - Excerpt Steele et al ။ , 2013
ကွန်ဒုံး-ED လေ့လာမှု + Kinsey Institute ကလည်
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်း၏ဝေဖန်မှု: အသက် ၁၈ မှ ၄၄ နှစ်အတွင်းအမျိုးသားများအတွက်လိင်အသုံးပြုမှု၊ စွဲလမ်းမှု၊ လိင်အင်္ဂါပျက်စီးခြင်းတို့အကြားဆက်စပ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း
ဂယ်ရီ Wilson က (7 မိနစ်ဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်) အားဖြင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု Effect စကေး၏ဝေဖန်မှု,
David Ludden ၏“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ပြProbleနာဖြစ်လာသနည်း” မှမှားယွင်းစွာဖော်ထုတ်ခြင်း
ဂယ်ရီ Wilson ကနီကိုးလ် Prause ကျော်သူ၏တရားဝင်အောင်ပွဲဆွေးနွေးနေသည်
ဂျော့ခ်ျဟက်စ် -“ လူတို့၏မြင်တွေ့ရသည့်ကာလတွင်သိပ္ပံပညာနှင့်သက်ဆိုင်သောဝါဒဖြန့်ချိမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လူတို့အားကူညီရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုထားသည်” (၂၀၁၈)
Porn Research: Fact လားစိတ်ကူးယဉ်လား? - ဂယ်ရီ Wilson (2018) ။
Erectile အလုပ်မဖြစ်၏အကဲဖြတ်ဘို့စောင့်ရှောက် Model ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရန် 2018 တည်းဖြတ်မူ (2018)
ဘိုဂတ်စ်လိင်စွဲလမ်းမှု“ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ” နှင့်အဝိဇ္ဇာမှူများ - Linda Hatch, PhD
ဧကရာဇ်အဘယ်သူမျှမအဝတ်အစားရှိထား: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အမျှတစ်ဦးကအရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် pose (2014)
အဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှားကျော်ဖြစ်ပါသည်: အသုံးပြုမှုနှင့်နယ်သာလန်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏သဘာဝ, ပြင်းထန်မှုနှင့်အတိုင်းအတာ။ et al Meerkerk ။